अझै हटेको छैन आरुबोटेबासीमा त्रास
Tuesday, 05.28.2019, 11:07am (GMT5.5)
काठमाडौं । नौ जनाको सामूहिक हत्या भएको पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ३ आरुबोटेमा स्थानीयमा कायम त्रास हटाउन प्रहरी टोली क्रियाशील छ । प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर तथा मातहतका एकाइबाट खटिएको टोलीले स्थानीयलाई त्रासमुक्त हुन, पूर्ववत् काममा फर्कन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
मिक्लाजुङ–३ का वडाध्यक्ष हस्तराज फियाक प्रहरी टोलीले घटनास्थल आसपासमा बसोबास गर्ने तथा दैनिक स्थानीयसँग परामर्श गर्ने हुँदा स्थानीयको त्रास कम गर्न सघाउ पुगेको बताउनुहुन्छ । “नौ जनाको हत्याले सबै त्रसित भयौँ”, वडाध्यक्ष फियाकले भन्नुभयो, “भय कम गर्न प्रहरी टोलीले सघाइरहेको छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलका अनुसार सामूहिक हत्या भएको स्थानमा अझै केही दिन प्रहरी टोली रहनेछ । “स्थानीयलाई सुरक्षित रहेको महसुस गराउन प्रहरी टोली घटनास्थल आसपासमा केही समय रहन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “सम्भव भएसम्म घटनाबारे सोधपुछ, प्रमाण सङ्कलनको कार्यसमेत हुनेछ ।” गत सोमबार मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेमा नौ जनाको सामूहिक हत्या भएपछि यहाँका स्थानीय त्रासमा छन् । स्थानीयमा रहेको त्रासलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा सामान्यीकरण गर्न प्रहरी टोली खटिएको हो ।
मङ्गलबारदेखि पाँचथर प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरसहितको टोली निरन्तर अनुसन्धान, स्थानीयसँग भेटघाट तथा सोधपुछमा खटिएको थियो । प्रहरी निरीक्षक पौडेलले कुँवरसहितको टोली फिदिम आउँदै गरेको बताउनुभयो । घटनास्थलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीलेसमेत सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट यहाँका बमबहादुर फियाक र उनका ज्वाइँ धनराज शेर्माको परिवारका नौ जनाको हत्यामा बमबहादुरका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिमको संलग्नता देखिएको छ । मानबहादुरको शव सामूहिक हत्या भएको भोलिपल्ट गत मङ्गलबार मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ७ लुमाङ्दिनमा उनको घर नजिकै फेला परेको थियो ।
मानबहादुर मानसिकरुपमा असन्तुलित रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । उनले नियमितरुपमा मानसिक समस्याविरुद्धको औषधि सेवन गर्दै आएको उनको परिवारले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । श्रीमती मनकुमारीसँग सम्बन्ध राम्रो नरहेका माखिमले सम्बन्ध विच्छेद गर्न भने अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
विगत छ महीनादेखि उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा प्रक्रिया पाँचथर जिल्ला अदालतमा अघि बढेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । हालैमात्र मनकुमारीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि तयार भएका माखिमले सम्बन्ध विच्छेदको बदलामा ससुराली र साढु दाइको परिवारको विभत्स हत्या गरेको प्रहरीको अनुमान छ । यससम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
कतिसम्म छ त्रास ?
मङ्गलबार बिहानदेखि कान्छीमाया फियाकले खाना खाएकी छैनन् । उनका हातगोडा अझै कापिरहेका छन् । ओठ सुकेका छन् । सबैले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिएर उनी गलिसकेकी छन् । चिया र केही फलफूल खाएर उनी घरको वरपर गर्छिन् । सुनसान उनको घरमा अहिले दिउँसोको समयमा मान्छेको घुइँचो टुट्दैन तर राति भने कोही हुँदैन ।
आरुबोटेमा बमहादुर फियाकको घरको सबैभन्दा नजिक कान्छीमायाको घर छ । कान्छीमाया बमबहादुरका काकाकी छोरी हुन् । उनै कान्छीमायाले बमबहादुरकी साइली छोरीकी छोरी सीता खजुमलाई आक्रमणकारीबाट बचाइन् तर त्यो विभत्स हत्याको दृश्य देखेपछि उनले शान्तिको श्वास फेर्न पाएकी छैनन् । “छ दिन भयो, निन्द्रा लागेको छैन । केही खाऔँ मन लाग्दैन”, चिन्तामा देखिएकी कान्छीमायाले भनिन्, “साह्रै डर लागेको छ, म त एक्लो मान्छे, अब कहाँ जाने ? के खाने ?”
मिक्लाजुङ–३, आरुबोटेका बमबहादुर फियाक र उनका ज्वाइँ धनराज शेर्माको परिवारका नौ जनाको गत सोमबार राति सामूहिक हत्या भएपछि यो वडाका अधिकांश स्थानीय त्रासमा बाँचेका छन् । वडाध्यक्ष हस्तराज फियाक फिल्ममा हेरेको काल्पनिक कथा र कतै सुनेको घटनाभन्दा विभत्स र डरलाग्दो घटना आफ्नै आँखाअघि भएपछि स्थानीय त्रासमा बाँचेको बताउनुहुन्छ । “अहिलेसम्म एक जना मान्छेले सबैको हत्या ग¥यो भन्ने पुष्टि भएको छ”, वडाध्यक्ष फियाकले भन्नुभयो, “तर, स्थानीयवासी यसलाई स्वीकार्न तयार नहुँदा त्रास कायम छ ।” यहाँका अधिकांश स्थानीय हत्यामा बमबहादुरका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिमलाई कसैले सहयोग गरेको ठान्छन् । नौ जनाको हत्या भएकै दिन माखिमको शव उनको घर नजिकै फेला परेको थियो । मिक्लाजुङ–२ दशमीका चन्द्रवीर शेर्माले भन्नुभयो, “स्थानीयवासी एक्लै हिँड्न र रातको समयमा निस्कन सक्ने अवस्था छैन, घरमा सुत्नसक्ने अवस्थामा छैन ।” विभत्स हत्याको दृश्य अधिकांश स्थानीयका आँखामा ताजै छ । मृतक धनराज शेर्माकी छिमेकी यामकुमारी फियाकले भन्नुभयो, “यस्तो घटना हामीले कहिल्यै सुनेका समेत थिएनौँ । नौ÷नौ जनालाई एक्लैले मा¥योभन्दा हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?” आफूहरु राम्रोसँग सुत्न नसकिरहेको यामकुमारीको भनाइ छ । “साना नानीलाई अब केही हुन्न भनेर सम्झाउँनै सकेका छैनौँ”, यामकुमारीले भन्नुभयो, “आधामासु भएर बाँचिरहेका छौँ ।”
स्थानीयमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न प्रहरीले अझै घटनास्थल छोडेको छैन । पाँचथर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेल ठूलो घटनापछि स्थानीयमा त्रास हुनु स्वभाविक भएको बताउनुहुन्छ । “यत्रो घटना घट्यो, स्थानीयवासी त्रासमा हुनु स्वभाविकै हो”, पौडेलले भन्नुभयो, “त्रास कम गर्न तथा सामूहिक हत्याका थप प्रमाण फेला पार्न प्रहरीको एउटा टोली घटनास्थलमा परिचालित छ ।” प्रहरीको उक्त टोली केही दिन घटनास्थलमै रहने भएको छ । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी नेतृत्वको टोली फिदिम फर्केको छ । पौडेलले भन्नुभयो, “लामो अनुसन्धानपछि टोली फिदिम आउनेछ ।”
स्थलगत अनुसन्धान सकियो
सामूहिक हत्याकाण्डको स्थलगत अनुसन्धान सकिएको छ । दुई घरमा नौ जनाको बीभत्स हत्याकाण्डको स्थलगत अनुसन्धान सकिएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो ।